काठमाडौं । फुटबल विश्वमै लोकप्रिय छ, अझ नेपालमा पनि । पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय सफलता हासिल गर्न थालेपछि क्रिकेट पनि नेपालमा लोकप्रिय बनेको छ । ठोकुवा त हैन, तर फुटबलनै नेपालमा बढी लोकप्रिय मानिन्छ । तर जतिनै लोकप्रिय भएपनि फुटबलले व्यावसायिक फड्को हान्न सकेन ।
तुलनात्मक रुपमा नेपालमा फुटबलरले खेलेरै पैसा कमाउँछन् । तर खेलाडीले फुटबलमा भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् । घरेलु खेलकुदमा फुटबल संघ वर्षभरीनै व्यस्त रहन्छ । फुटबलमा अरु खेलको तुलनामा बजेट छ, कार्यक्रम छ, प्रतियोगिता व्यवस्थित छन् । तर फुटबल व्यावसायिक बाटोतर्फ अघि बढ्नै सकेको थिएन ।
यसका धेरै कारण छ । तर मुख्य कारण नेपाली फुटबलको घरेलु संरचना नै हो । नेपालका जति पनि डिभिजन क्लब छन्, ती सबै काठमाडौं वरपर छन् । नेपाली फुटबल काठमाडौं बाहिर जानै सकेनन् । समग्र देशलाई फुटबलले जोड्नै सकेन । उदाहरण हेरौं न, ललितपुर एउटै जिल्लामा ५ वटा ए डिभिजन क्लब छन् । एउटा जिल्लाले कसरी थेग्छ ५ वटा शीर्ष डिभजिनको क्लब ? न फुटबल खेल्ने क्लबलाई थाहा छ, न फुटबल खेलाउने एन्फा नेतृत्वलाई ? यो संरचनाबाट फुटबलको विकास सम्भव थिएन ।
आईतबार नेपाली फुटबल ईतिहासमा एउटा नविनतम कार्यको थालनी भएको छ । फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) का टिम र मालिक सार्वजनिक गरिए । अब पक्का भयो, घरेलु फुटबलमा फ्रेन्चाइज लिग सुरु हुनेछ । प्रारम्भमै यसले दुई राम्रो संकेत गरेको छ । पहिलो, फ्रेन्चाइज टिमहरु प्रादेशीक संरचना अनुसार तयार गरिएका छन् । यसमा सिंगो देशको प्रतिनिधित्व भएको छ । दोस्रो, फुटबलमा व्यावसायिक घरानाहरुको प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष फाईदा नेपाली फुटबलले पाउनेछ । जसको नतिजा निकट भविष्यमा देखिदै जानेछ ।
यसको सबैभन्दा बढी फाईदा खेलाडीलाई हुनेछ । लटरपटर घरेलु लिग संरचनाबाट वाक्क भएका खेलाडीलाई व्यावसायिक फुटबल आयआर्जनको राम्रो माध्यम बन्न सक्छ । प्रारम्भमै केही खेलाडीले मोटो रकमले गोजी भरिसकेका छन् । निकट भविष्यमा अझ यो बढ्दै जानेछ । विस्तारै खेलाडीले फुटबल खेलेरै मनग्य आर्जन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
व्यावसायिक फुटबलकै कुरा गरेर हाम्रो धेरै पुस्ता बित्यो । तर खेलाडी पलायन हुन रोकिएनन् । लिगकै उत्कृष्ट खेलाडी बनेका हेमन गुरुङ गत वर्ष मात्र अष्ट्रेलिया पलायन भए । जब सम्म नीजि क्षेत्र फुटबलसंग जोडिदैनन्, तब सम्म खेलकुद पूर्व व्यावसायिक बन्न सक्दैन । एनएसएल मार्फत नीजि क्षेत्र फुटबलसँग जोडिन आएको छ । के सिंगो खेलकुदले स्वागत नगर्ने त ?